စစ္မွန္ေသာ ဧည့္ခန္းေကာင္း တခုကို ဘယ္လို ဖန္တီးရယူမလဲ? | Weber Cambodia
စစ္မွန္ေသာ ဧည့္ခန္းေကာင္း တခုကို ဘယ္လို ဖန္တီးရယူမလဲ?
All ဧည့်ခန်း products
လူတွေရဲ့ စိတ်နှင့်ခန္ဒာ အပန်းပြေစေရန် ဧည့်ခန်းကောင်းတခုတွင်အနားယူခြင်းသည် စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုကို အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လူတွေအတူတကွ အခန်းတခုထဲတွင်တွေ့ဆုံ၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းအရာများ မျှဝေခြင်းသည် ဧည့်ခန်းဟုခေါ်သောအခန်းထဲတွင်သာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဧည့်ခန်းဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်သည် လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခန်းဖြစ်ဖြစ် အလွန်အရေးပါသောနေရာမှပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ဧည့်ခန်းကို ပိုမိုကျယ်ဝန်းသောအသွင်ဆောင်ရန်နှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် သဘာဝအရောင်များနှင့် အရောင်ဖျော့များကို ပိုမိုရွေးချယ်အသုံးပြုပေးပါ။ အဖြူနှင့်အနက်ရောင် တို့သည် ပရိဘောဂရွေးချယ်ရာတွင် အသုံးများဆုံးအရောင်များဖြစ်ကြသည်။
အိမ်တအိမ် သည်လူများစွာ၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များပြည့်နှက်နေသောနေရာဖြစ်သောကြောင့် အိမ်၏ပုံစံသည်လည်း အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နေပါသည်။ ခေတ်သစ်အိမ်အလှဆင်ခြင်း၏ အဓိကကျသော အချက်ဖြစ်သည့် ရိုးရှင်းမှု လှပသောပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုတို့သည် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ၏ လူနေမှုပုံစံနှင့်လဲ ကိုက်ညီလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အိမ်အတွက်စဉ်းစား၍မရ ဖြစ်နေပါက တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ဗိသုကာပညာရှင် အိမ်တွင်းအလှဆင်ပညာရှင်တို့ဖြင့် တိုင်ပင်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးအဖြေတခုဖြစ်ပါသည်။
အိမ်တအိမ်ပိုင်ဆိုင်ရာတွင် သင်၏စိတ်ကူးအတိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းကို အမြဲတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရာတွင် လက်တွေ့တွင် အကုန်အကျများနိုင်သောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြာချိန်တို့ကိုတွက်ချက်၍ သင်၏အသုံးပြုမည့်ငွေကြေးပမာဏနှင့် ချိန်ဆရပါမည်။ မဂ္ဂဇင်း အင်တာနက်စသည်တို့မှလည်း အချိန် ငွေကြေးနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေးနည်းလမ်းများ အကြံပြုချက်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။
သင်၏ ဧည့်ခန်းပုံစံရွေးချယ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်
အမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိကြတဲ့ “အရိုးရှင်းဆုံးသည်အကောင်းဆုံး” ဟူသောစကားသည် အဖိုးတန်လှပါသည်။ အနည်းဆုံးမှ အများဆုံးဖြစ်စေရန် ရှေ့ကတင်ပြခဲ့သလို ပစ္စည်းများ အရောင်များ အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း အစရှိသည်တို့တွင်ပါ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်းအများကြီးကိုရွေးချယ်အသုံးမပြုပဲ ပန်းချီကားချပ်ကြီးများ ရှုခင်းပုံများကိုအဓိကအာရုံစိုက်ရမည်။ ခေတ်ပေါ်အိမ်တအိမ် ပြင်ဆင်မည်ဆိုပါက အရောင်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသင့်ပြီး အနုအရင့်ကိုလဲထိန်းချုပ်သုံးစွဲရမည်။ ထိုကဲ့သို့ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက ပုံမှန်မဟုတ်သောအစိတ်အပိုင်းများ ပေါင်းစပ်သောအခါတွင် လွယ်ကူစွာပင်မြင်တွေ့နေရမည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းသည် Vintage style အိမ်ခန်းအလှဆင်ခြင်းထက်ပင်ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- နံရံများအားလုံးကို ဆေးအရောင်တရောင်ထဲသုတ်ပြီး အခြားအလှဆင်ယင်မှုများပါ ထပ်ပေါင်းမထည့်ထားကာ ကြမ်းခင်းကိုလဲ မည်သည့်ပုံစံမျှဖော်မထားပါက တခန်းလုံးကို တသားတည်းအနေအထားဖြင့်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများအရ ခေတ်ပေါ်ပုံစံတွင် ခိုင်ခံ့၍ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများကိုသာ ရွေးချယ်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မာဘလ် ဂရက်နိုက်နှင့် ဆိုဒ်ကြီးကြွေပြားများသည် ပိုမိုခေတ်စားလာပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများအသုံးပြုမည်ဆိုပါက သတိပြုရမည့်အချက်များကိုလဲ သိထားသင့်ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် အထက်ပါပစ္စည်းများအားလုံးသည် စျေးနှုန်းမြင့်မားသည် ထို့အပြင် အရွယ်အစားအလွန်ကြီးမားခြင်း ချောမွတ်သောမျက်နှာပြင်နှင့် ရေစိမ့်ဝင်နှုန်း ရေစုပ်နှုန်း အလွန်နည်းခြင်း အစရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းများကြောင့် ဗိသုကာများသည် အိမ်ပိုင်ရှင်များ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ပစ္စည်းများဖြင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိစေရန်ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားသင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်၍ ကြွေပြားကပ်ကော်ကိုမှားယွင်းရွေးချယ်မိပါက ကြွေပြားပါတန်ဖိုးကျသွား နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေသုံးကြွေပြားကပ်ကော်သည် ကြွေပြားအပေါက်များကြားထဲသို့ ထိုးဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်သောကြောင့် ကြွေပြားကွာခြင်း မျက်နှာပြင်ညီညာမှုမရှိခြင်း စသောပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။